Ungonwaba njani ngaphandle kwemali: Iingcebiso namacebo Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungonwabisa njani ngaphandle kwemali: Iingcebiso kunye namaqhinga
Juni 27, 2019 0 IiCententarios 691
Akuthathi mali ininzi ukwenza umzuzu wokuzonwabisa ngento ongalibalekiyo. Ngaphezulu kwayo yonke into, ngamanye amaxesha apho uhlahlo-lwabiwo mali oluqinisekileyo luthintela inkcitho ngexesha lokuzonwabisa.
Ngaba ungathanda ukwazi ukonwaba njani ngaphandle kwemali? Ngaba ucinga ukuba kunokwenzeka ukufumana indawo yolonwabo ngaphandle kokufumana iindleko ezinkulu? Ewe kunjalo! Into ebalulekileyo lulonwabo kusapho nabahlobo, kuba, iya kuhlala ixabiseke kakhulu ukuba kunye nabantu obathandayo kunye nokuqinisa amaqhina emvakalelo.
Kuphela Uya kudinga ubuchule ukufumana imisebenzi yolonwabo ngaphandle kokutyala imali. Ngamanye amaxesha kubonakala kungenakwenzeka, ngakumbi ukuba unabo abantwana, kodwa bakhuthazwe ukuba bahlole ukhetho kunye nabo, ngoko baya kukhuthaza umbono kunye. Unam
Yonwaba ngaphandle kwemali ekhaya
Awudingi kutyala imali kuyo Dala umoya wobumnandi ekhaya. Thatha ithuba kwizithuba zakho kwaye udale imeko efanelekileyo yovuyo olufunayo.
Kunye nosapho kunye nabahlobo bakho kwaye nokuba wedwa, ninokwenza izinto ezahlukeneyo ngaphandle kokuchitha imali. Olunye ukhetho onokuluhlola zezi: imidlalo yebhodi, imisebenzi yezandla, ukupeyinta, ukumamela umculo, ukufunda incwadi nokudlala imidlalo. Nantsi eminye imisebenzi onokuyenza ngaphandle kokutyala imali.
Ngorhatya okanye kwi-movie ebusuku: Oku kufanelekile ukuba ukonwabele njengesibini, usapho okanye nabahlobo bakho. Khetha imuvi emnandi nenomdla kuye wonke umntu. Bazilungiselela kunye izidlo ezityiwayo kunye neziselo ezenziwe ekhaya kwaye bayonwabele!
Pool: Iichibi zilungile ngezo ntsuku apho ungafumani ndawo zokuzonwabisa ngaphandle kwemali. Ukuba unayo nayiphi na, ke yisebenzise, ​​okanye ungamema umhlobo onayo. Lungisa isidlo sasekhaya esimnandi kwaye uyonwabele usuku lwakho, embindini wengxoxo emnandi, umculo kunye nemidlalo yebhodi. Ndiyakuqinisekisa ukuba usapho lwakho luyonwabele ngokupheleleyo.
Isiciko: Abantwana nabantu abancinci bayazithanda ezi ntlanganiso zobusuku apho babelana khona ngamava amnandi. Ungayenza kunye nabantwana bakho kwaye uchithe ubusuku obumnandi. Ukuba unqwenela, ungabamema nabahlobo abathembekileyo. Lungisa ezinye iicapés kunye neziselo ezenziwe ekhaya
Isidlo sangokuhlwa: Awudingi ukuya kwindawo yokutyela ebizayo ukuze ufumane isidlo sangokuhlwa. Ungayenza ekhaya. Yenza umoya wothando, ubeke amakhandlela, igumbi lakho elingcono leetafile, ulungiselelo oluncinci lweentyatyambo zendalo. Ukuba awuyazi indlela yokupheka kakuhle, cela uncedo kumhlobo wakho.
Ukuzonwabisa nge-karaoke: Igumbi lokuhlala kwindlu yakho linokuba yeyona ndawo intle yokuzisa iitalente zobugcisa. Ixesha elincinci lekaraoke nosapho kunye nabahlobo liya kuba lilungile, kwaye awudingi kutyala imali.
Usuku lwe-spa lwasekhaya: Yeyona ndlela ilungileyo yokufumana imvume yokuzionwabisa ekhaya.
Ipikniki yasekhaya: Unokuba nepikiniki emva kwemini kwigadi yendlu yakho.
Iti yasemva kwemini: Hlanganisa abahlobo bakho abasenyongweni kwaye ubameme iti iti yamayeza amnandi okanye ikofu enencasa. Baza kuchitha imini enkulu bexoxa ngovuyo.
Yonwaba ngaphandle kwemali kude nekhaya
Nangona kubonakala kuyinto entle, kude nekhaya Kukho nezinto ezininzi onokukhetha ukuzonwabisa ngaphandle kokutyala imali. Nazi ezinye iindlela:
Ndwendwela iindawo zenkcubeko
Jonga ibhilibhodi yenkcubeko yesixeko sakho, phantse zonke izixeko zineziko lenkcubeko. Jonga iphephandaba, okanye iphepha elikwi-intanethi, apho ngokuqinisekileyo uya kufumana indawo apho banayo Iikonsathi, iithiyetha, imyuziyam, imiboniso kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yolonwabo Ungaya phi mahala!
Enye ye usuku lwensimi Kulungile ukuba unandiphe isidlo esimnandi kunye nokwabelana nosapho lokonwabela indalo. Olu hlobo lwemisebenzi lubonelela ngokuphila ngokomoya nangokomzimba, ukongeza, ukuthanda ubudlelwane bosapho.
Qaphela ezemidlalo al ngaphandle, uwedwa okanye uhamba nesicwangciso esiliqili sokuzonwabisa uze uphumle ngaphandle kokutyala imali. Ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba, ukugijima kunye nokudanisa epakini zizinto endikumema ukuba uziphonononge.
Bukela isixeko sakho
Ukwenza ukuhamba okuhle Awudingi kutyala imali esixekweni. Ikwalithuba elihle lokuba undwendwele iindawo ekunokwenzeka ukuba khange ukhe uzityelele okanye ongathanda ukuphinda uzityelele. Zilungiselele ngebhotile yamanzi kunye nezinye izinto ezinokutya nje xa kunokubangela ukuba utye okuthile. Ukuba uhamba nabantwana kuya kufuneka uthathele ingqalelo le ndlela ngakumbi.
Ndwendwela ithala leencwadi Indawo okuyo yeyokhetho oluhle kakhulu lokufumana loo ncwadi ungathanda ukuyifunda.
Ndwendwela iindawo zabakhenkethi Isixeko sakho lukhetho oluhle kakhulu, kwaye awudingi kutyala imali ngalo.
Ezinye iindlela zokuzonwabisa ngaphandle kokutyala imali
Kukho iintlobo ngeentlobo zezinto zokuzonwabisa ezifanelekileyo ukugcina imali kwaye eyona nto ikuvumela ukuba uchithe ixesha lokuzihlaziya. Unako ukuzenza kuphela njengentsapho, kwaye ezinye zazo zineempawu ezinemveliso.
Bamba lawo maxesha akhethekileyo, yendalo, kuluntu, iindawo ezintle kwaye wabelane ngazo nabathandekayo bakho kunye nabahlobo. Unokunikezela nange-albhamu yale mifanekiso kumshicileli wedijithali kwaye ufumane imali.
Le nto uyonwabisa iyonwabisa yey ngubani othanda ukubhala. Ke, ukuba ungomnye waba, kwaye ngalo mzuzu ungekho umbono wokuzonwabisa ngaphandle kwemali, jonga olu khetho.
Bhala iinkumbulo zakho, ibali, inoveli, umbongo, okanye into obusoloko ufuna ukuyithetha ngeeleta. Tyhila!
Umdaniso uba mnandi kakhulu, kwaye awudingi kutyala imali. Vula indawo endlwini yakho, kwaye beka umculo owuthandayo kwaye uhambise ithambo! Ukuba ufuna ukuyonwabisa ngakumbi, mema abanye abahlobo okanye usapho kwaye ulonwabele ixesha.
Kubathandi basekhitshini, ukuba unexesha lamahhala kwaye ufuna ukonwaba, thatha ithuba ukwenza iindlela zokupheka ezintsha. Guqula imenyu kwaye uqalise ukubamba izinto ezintsha kukupheka kwakho.
Ukuba awuyazi indlela yokupheka kwaye ungathanda ukufunda eli lixesha lokuba ukwenze oko, khangela tutorials online. Buza umhlobo okanye umhlobo onobuchule bokucwangcisa ngoncedo, ndicela undifundise kwaye ukonwabele ukufunda ukupheka.
Funda ukudlala isixhobo, ungalandela kwisifundo esikwi-intanethi, okanye ujonge umntu oza kukufundisa. Kukwakho nezikolo ezinikezela iiklasi zasimahla zokufunda ukudlala isixhobo.
Thatha izifundo zokucula
Ukuba iphupha lakho kukucula kwaye wonwabe Kwenze oko, emva koko uqhubeke kwaye uthathe izifundo zokucula kwiziko lenkcubeko kwindawo yakho.
Kukho imibutho ebonelela ngemisebenzi eyahlukeneyo ngeenjongo zezentlalo kwaye ezinye zazo zinokuba mnandi. Phakathi kwabo, imisebenzi yendalo, imisebenzi yolonwabo yabantwana nabadala, okanye imisebenzi yokuqokelelwa kweendawo zenkcubeko.
Ezi zimbalwa, kuzo zonke onokuzifumana. Ukuba ukhangela isixeko sakho ngokuqinisekileyo, uya kufumana imisebenzi eyahlukeneyo ziya kuba mnandi, ziyonwabisa kwaye awudingi kutyala imali. Ukongeza, unokufumana inzuzo engabalulekanga efana ne-humanism.
Ukucoca kunye nokusebenziseka kwakhona
Unoyolo lokwenza ucoceko olunzulu kwindlu yakho, ukutshintsha imeko, ukulungisa ifanitshala. Kwenze kwi a Imozulu emnandi neyonwabisayoNgomculo Qokelela zonke izinto ongasazisebenzisi.
Emva koko khetha ngokwemeko yakho. Sebenzisa kwakhona abo bakhonzayo, balahle abangasebenzi. Unokuthengisa kwakhona into ekwimeko elungileyo kwaye ufumane imali.
Ezinye iingcebiso ezisebenzisekayo zokuzonwabisa ngaphandle kwemali
Cwangcisa imisebenzi ngexesha: Ngale nto uyakufuna ukubonelelwa ngexesha elisimahla, kucace ukuba ziiyure okanye iintsuku.
Phonononga uhambo olunokwenzeka yemisebenzi ukwenzela ukuba ukhethe ngeendlela ezininzi.
Vavanya kwakhona ukuba zeziphi izixhobo onazo kwi-pantry yakho yokwenza imisebenzi.
Ungathandabuzi ukuya kusapho lwakho nakubahlobo bakho Iingcebiso, cwangcisa imisebenzi kunye. Jonga amathuba oncedo onawo xa ufuna isifundo, isifundo, ucweyo, njl. Malunga nomsebenzi othile.
Jonga amathuba okubhuka kwangaphambili kweminye imisebenzi, ngakumbi ukuba bakhenketha besiya emaphandleni, bakhokelelela ukuya kwiimyuziyam okanye kwezinye iindawo.
Qiniseka ukuba bakhululekile ngokwenene, Ngamanye amaxesha bacela iikhomishini ezincinci ngeendleko zenkqubo.
Iingxaki zezoqoqosho akufuneki zibe sisikhubekiso ukuze wonwabe ngaphandle kokuchitha imali. Kukho uluhlu olubanzi lwezinto ezinokwenzeka ukonwaba njani ngaphandle kwemali, Ndisandula ukukhankanya izinto ezimbalwa onokukhetha kuzo.
Sebenzisa umbono wakho kwaye uchithe ixesha elimnandi ngokwenene kunye nabantu obathandayo okanye yedwa. Qhubeka kwaye ungaphoswa lithuba yenza izinto ezintsha nezimangalisayo ngaphandle kokutyala imali. Cinga ngazo zonke ezi ndlela kwaye awuyi kuzisola.
1 Yonwaba ngaphandle kwemali ekhaya
2 Yonwaba ngaphandle kwemali kude nekhaya
3 Ndwendwela iindawo zenkcubeko
4 Usuku lwentsimi
6 Bukela isixeko sakho
7 Ezinye iindlela zokuzonwabisa ngaphandle kokutyala imali
7.1 Thatha imifanekiso
8 Dlala isixhobo
8.1 Thatha izifundo zokucula
8.2 Imisebenzi yokuzinikela
8.3 Ukucoca kunye nokusebenziseka kwakhona
9 Ezinye iingcebiso ezisebenzisekayo zokuzonwabisa ngaphandle kwemali
Ukurekhoda ingoma ekhaya. Zazi iingcebiso ezilungileyo!